Maninona ireo mpitsangatsangana UK no manana vaovao tsara momba ny fizahan-tany any Torkia, Tonizia ary Egypt?
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Maninona ireo mpitsangatsangana UK no manana vaovao tsara momba ny fizahan-tany any Torkia, Tonizia ary Egypt?
Aogositra 8, 2018
Ny fandrahonana fampihorohoroana heverina fa nampihena ny mpizahatany avy any UK dia miverina any Torkia, Egypta ary Torkia, ny toerana rehetra izay noheverin'ny maro ho tandindomin-doza na fampihorohoroana. Izany dia araka ny fikarohana farany izay maminavina ny lamina fitsangatsanganana ho avy amin'ny alàlan'ny famakafakana ireo fifanakalozana famandrihana ataon'ireo masoivohon'ny dia.
Vaovao tsara tokoa ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any Torkia, Tonizia ary Egypt, na dia mbola tsy mamerina ny fahafaha-manao feno aza ireo firenena Arabo roa. Tiorkia manana ny anjarany lehibe indrindra amin'ny telo, dia mampiseho ny fitomboan'ny 66.4% amin'ny famandrihana fialamboly UK tamin'ny taona lasa; Mialoha 50.9% i Egypt, ary i Tonizia - miaraka amin'ny anjarany 0.7% - dia mialoha 901.0%.
Ny famandrihana fialam-boly mankany amin'ny toerana azo antoka nentim-paharazana, i Espana sy Portugal dia niverina 2.5% sy 0.2% avy, araka ny angon-drakitra ForwardKeys sy GfK, na dia notazonina ho ambony aza ny isan'ny mpitsidika azy ireo tato anatin'ny taona vitsivitsy noho ny loza mitatao amin'ny toeran-kafa .
Ny valim-pikarohana dia nanambara ny tena fiatraikan'ny asa fampihorohoroana tany amin'ny faritra afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra tato anatin'ny taona vitsivitsy, ao anatin'izany i Maraoka, ary mampiseho fa vao nanomboka ny fanarenana.
Raha ny fahaizana efa voalahatra dia samy manana ny halavirana lavitra i Egypte sy Tonizia hahatratra ny ambaratonga 2015. Tamin'ny telovolana fahatelo tamin'ity taona ity, manana toerana 46% i Egypt telo taona lasa izay, ary 38% i Tonizia.
Na izany aza, mandroso tsara ny fanarenana an'i Torkia. Ny seza amin'ny sidina mivantana avy any Angletera dia niverina tamin'ny 94% tamin'ny taona 2015.
Ny fikarohana ForwardKeys sy GfK farany teo - notontosaina nandritra ny famelabelaran-kevitra niarahana tamin'ny HSBC Global Research - dia mampiseho fa ny fitsangatsanganana fialan-tsasatra UK ankapobeny dia mialoha 4.9% amin'ity fahavaratra ity.
Fairmont St Andrews dia nanendry an'i Lorraine Garvie ho talen'ny varotra
Tsy mazava: State of Emergency in Hawaii County?